पराजयपछि प्रशिक्षक अल्मुताइरीको जवाफ : नतिजा बिर्सिनुस्, तपाईंलाई खेल मन परेन ? – Dainik Sangalo
पराजयपछि प्रशिक्षक अल्मुताइरीको जवाफ : नतिजा बिर्सिनुस्, तपाईंलाई खेल मन परेन ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र २१, २०७८ समय: १४:१८:४६
नेपालले भारतसित दोस्रो मैत्रिपूर्ण म्याचमा २-१ को पराजय स्वीकार्न वाध्य भए पनि नेपाली टिमका प्रमुख प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी सन्तुष्ट देखिएका छन् । उनले पहिलोभन्दा दोस्रो म्याचमा नेपालले सुधार गरेको बताए ।
खेलपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अल्मुताइरीले नेपालले राम्रो खेलेको तर मौकाको सदुपयोग गर्न नसकेको प्रतिक्रिया दिए। आफू टोलीसँग खुशी र गौरवान्वित बनेको समेत उनको भनाइ थियो ।
अल्मुताइरीले भने, ‘मैले खेलाडीलाई हारसँग नडराउ भनेर मैदानमा पठाएको थिएँ । भारतले पहिलो हाफमा पाँच फरवार्ड खेलाएको थियो । र, खेलको सुरुवातदेखि हामीमाथि आक्रमण गर्ने योजनामा थियो । हामी चाहिँ दोस्रो हाफको प्रतिक्षामा थियौं ।’
दोस्रो गोल खाएपछि नेपाल खेलमा फर्किएको उनले बताए । ‘मसँग २५ गोर्खाली छन् , इन्साअल्लाह हामी साफमा ब्रेक गर्न सक्छौं । फिनिसिङमा समस्या छ । तर हामी सुधार्ने प्रयास गर्नेछौं । नतिजा बिर्सिनुस्, तपाईंलाई खेल मन परेन ?’
Last Updated on: September 6th, 2021 at 2:18 pm